Inqubomgomo Yamakhukhi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
1 Umgomo Wamakhukhi
1.1 Amakhukhi asetshenziswe yile webhusayithi
1.2 Amakhukhi avela eceleni esiwasebenzisa kule webhusayithi nokuthi kufanele wazi
1.3 Ungawaphatha futhi uwakhubaze kanjani la makhukhi
I-LSSI-CE idinga ukuthi sonke esine-blog noma iwebhusayithi yethu xwayisa umsebenzisi ngobukhona bamakhukhi, wazise ngawo futhi udinge imvume yokuwalanda.
I-Article 22.2 yoMthetho 34 / 2002. "Abahlinzeki bensizakalo bangasebenzisa ukugcinwa kwedatha kanye namadivayisi okubuyisa kumishini ebulalayo yabamukeli, inqobo nje uma banikeze imvume yabo ngemuva kokuthi benikezwe imininingwane ecacile nephelele ngokusetshenziswa kwabo, ikakhulukazi, ngezinhloso zokulungiswa kwedatha, ngokuya ngezinhlinzeko ze-Organic Law 15 / 1999, kaDisemba 13, ekuvikelweni kwemininingwane yomuntu siqu ”.
Njengomuntu ophethe le webhusayithi, ngiye ngazama ukuhambisana nobunzima obukhulu kakhulu ku-athikili 22.2 woMthetho 34/2002 on Services of the Information Society and Electronic Commerce maqondana namakhukhi, kepha, ngokubheka indlela i-inthanethi namawebhusayithi kuyasebenza, akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukuba nemininingwane ebuyekeziwe kumakhukhi abantu besithathu abangayisebenzisa ngale webhusayithi.
Lokhu kusebenza ikakhulukazi ezimweni lapho leli khasi lewebhu liqukethe izinto ezihlanganisiwe: okungukuthi, imibhalo, imibhalo, izithombe noma amafilimu amafushane agcinwe kwenye indawo, kepha akhonjiswe kwiwebhusayithi yethu.
Ngakho-ke, uma kwenzeka uthola lolu hlobo lwamakhukhi kule webhusayithi futhi angekho kuhlu olulandelayo, ngicela ungazise. Ungaxhumana nomuntu wesithathu ngqo ukucela imininingwane mayelana namakhukhi owabekayo, inhloso nobude bekhukhi, nokuthi iqinisekise kanjani ubumfihlo bakho.
Amakhukhi asetshenziswe yile webhusayithi
Amakhukhi asetshenziswa kule webhusayithi izinhlangano zakho nezesithathu Ukuthola isipiliyoni esingcono sokuphequlula, ungabelana ngokuqukethwe kumanethiwekhi omphakathi, ukukubonisa izikhangiso ezisuselwa kuzintshisekelo zakho nokuthola izibalo zomsebenzisi.
Njengomsebenzisi, ungenqaba ukucubungulwa kwedatha noma imininingwane ngokuvimba la makhukhi ngokucushwa kwesiphequluli sakho. Kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi, uma wenza, le sayithi ayisebenzi kahle.
Ngaphansi kwemigomo efakiwe ku-Article 22.2 ye-Law 34 / 2002 Yezinsizakalo ze-Information Society kanye ne-Eletronics Commerce, uma uqhubeka nokubhekabheka, uzobe unikeza imvume yakho ukusetshenziselwa amakhukhi engiwa imininingwane ngezansi.
Amakhukhi akule webhusayithi asiza uku:
Yenza le webhusayithi isebenze kahle
Gcina ukuthi ungene ngemvume ngaso sonke isikhathi lapho uvakashela leli sayithi
Khumbula izilungiselelo zakho ngesikhathi naphakathi kokuvakasha
Vumela ukuthi ubuke amavidiyo
Ukuthi ungaba amakhasi namakhasi wokuxhumana nomphakathi
Qhubeka uthuthukise le webhusayithi
Sukukhombisa izikhangiso ezisuselwa kumikhuba yakho yokudlulisa amehlo
Angisoze ngasebenzisa amakhukhi ku-:
Qoqa imininingwane ekhonjwa nguwe (ngaphandle kwemvume yakho ebonakalayo)
Qoqa imininingwane ebucayi (ngaphandle kwemvume yakho ebonakalayo)
Yabelana ngemininingwane yakho yokuzibandakanya kubantu besithathu
Amakhukhi avela eceleni esiwasebenzisa kule webhusayithi nokuthi kufanele wazi
Le webhusayithi, njengamawebhusayithi amaningi, ifaka izici ezinikezwe ngabantu besithathu.
Imiklamo emisha noma izinsizakalo ezivela eceleni nazo zivivinywa njalo ukuthola izincomo nemibiko. Lokhu ngezikhathi ezithile kungaguqula izilungiselelo zekhukhi namakhukhi angachazwanga kule nqubomgomo avela. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi angamakhukhi esikhashana okungeke kwenzeke ngaso sonke isikhathi ukuwabika nokuthi anezinjongo zokufunda nokuhlola kuphela. Akunakusetshenziswa amakhukhi afaka ubumfihlo bakho engcupheni.
Phakathi kwamakhukhi ozinza okuvela eceleni yilawa:
Okukhiqizwe ngezinsizakalo zokuhlaziya, ngqo, iGoogle Analytics ukusiza iwebhusayithi ukuhlaziya ukusetshenziswa okwenziwe ngabasebenzisi bewebhusayithi futhi ithuthukise ukusebenza kwayo, kepha akunasici lapho kuhlotshaniswa nedatha engakhomba umsebenzisi.
I-Google Analytics iyinsiza ye-web analytics enikezwe iGoogle, Inc., inkampani eDelaware enehhovisi layo eliyinhloko elise1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States ("Google").
Umsebenzisi angathinta uhlobo lwamakhukhi asetshenziswa i-Google, i-Google + Cookie ne-Google Maps, ngokuya ngemibandela esekhasini layo mayelana nokuthi yini uhlobo lwamakhukhi asetshenzisiwe.
Ukulandelelwa kwe-Google Adwords: Sisebenzisa ukulandela ngomkhondo ukuguqulwa kwe-Google AdWords. Ukulandela ngomkhondo ukuguqulwa kuyithuluzi lamahhala elikhombisa okwenzekayo ngemuva noma ngabe ikhasimende lichofoza izikhangiso zakho, noma ngabe lithenge umkhiqizo noma libhalisele incwadi yakho yezindaba. Lawa makhukhi aphelelwa yisikhathi ngemuva kwezinsuku ezingama-30 futhi aqukethe imininingwane engakukhomba mathupha.
Ngeminye imininingwane ngokulandela umkhondo Ukuguqulwa kweGoogle nenqubomgomo yobumfihlo.
Ukumaketha kabusha kwe-Google AdWords: Sisebenzisa ukumaketha kabusha kwe-Google AdWords okusebenzisa amakhukhi ukusisiza ukuletha izikhangiso ezihlosiwe ku-inthanethi ngokuya ngokuvakasha kwangaphambilini kuwebhusayithi yethu. I-Google isebenzisa lolu lwazi ukubonisa izikhangiso kumawebhusayithi ahlukahlukene avela eceleni kwi-Intanethi. Lawa makhukhi asezophelelwa yisikhathi futhi aqukethe imininingwane engakukhomba mathupha. Sicela uye kufayela le- Isaziso sobumfihlo sokukhangisa seGoogle Ngeminye imininingwane.
Ukukhangisa okwenziwe ngabakwa-AdWords, ngokususelwa kuzintshisakalo zomsebenzisi, kuyenziwa futhi kukhonjiswe kusuka kulwazi oluqoqwe kusuka emisebenzini nasekulandeleni okwenziwa ngumsebenzisi kwamanye amawebhusayithi, ukusetshenziswa kwamadivayisi, izinhlelo zokusebenza noma isoftware ehlobene, ukuxhumana amanye amathuluzi we-Google (amakhukhi we-DoubleClick).
I-DoubleClick isebenzisa amakhukhi ukwenza ngcono ukukhangisa. Amakhukhi asetshenziselwa kakhulu ukukhomba izikhangiso ngokuya ngokuqukethwe okuhlobene nomsebenzisi, athuthukise imibiko yokusebenza komkhankaso futhi agweme ukubonisa izikhangiso umsebenzisi asezibonile.
Abakwa-DoubleClick basebenzisa ama-ID amakhukhi ukugcina umkhondo wokuthi iyiphi izikhangiso ezikhonjisiwe kwiziphequluli ezithile. Ngesikhathi sokushicilela isikhangiso esipheqululini, i-DoubleClick ingasebenzisa i-ID yekhukhi yalesi siphequluli ukubheka ukuthi isiphi isikhangiso se-DoubleClick esivele sikhonjisiwe kuleso siphequluli. Le yindlela i-DoubleClick ekugwema ngayo ukubonisa izikhangiso umsebenzisi asezibonile. Ngokufanayo, ama-ID amakhukhi avumela i-DoubleClick ukurekhoda ukuguqulwa okuhlobene nezicelo zesikhangiso, njengokuthi lapho umsebenzisi ebona isikhangiso se-DoubleClick futhi, kamuva, asebenzisa isiphequluli esifanayo ukuvakashela iwebhusayithi yomkhangisi futhi athenge .
Amakhukhi e-DoubleClick ayiqukethe imininingwane ekhonjwa indlela. Kwesinye isikhathi, ikhukhi liqukethe isikhombi esingeziwe esibonakala ngokufana ne-ID yekhukhi. Lesi sikhombi sisetshenziselwa ukukhomba umkhankaso wokukhangisa lapho umsebenzisi ebekade obala khona; noma kunjalo, i-DoubleClick ayigcini olunye uhlobo lwedatha kukhukhi futhi, ngaphezu kwalokho, imininingwane ayibonakali uqobo.
Njengomsebenzisi we-Intanethi, nganoma yisiphi isikhathi uzokwazi ukususa imininingwane ehlobene nemikhuba yakho yokuphequlula, nephrofayili ehlobene ekhiqize imikhuba edlulisiwe, ukufinyelela ngqo futhi mahhala: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . Uma umsebenzisi ekhubaza lo msebenzi, i-ID ye-cookie ehlukile ye-DoubleClick esipheqululini somsebenzisi ibhalwe phansi ngesigaba se- “OPT_OUT”. Ngoba i-ID yamakhukhi eyingqayizivele ayisasebenzi, ikhukhi elikhubazekile alikwazi ukuhlotshaniswa nesiphequluli esithile.
I-WordPress: u-es ungumsebenzisi we-WordPress blog supply and platform hosting, ephethwe inkampani yaseNyakatho Melika i-Automattic, Inc. Ngalezi zinhloso, ukusetshenziswa kwalawo makhukhi yizinhlelo akukaze kube ngaphansi kokulawulwa noma ukuphathwa komuntu ophethe iwebhu, bangahle shintsha ukusebenza kwayo nganoma yisiphi isikhathi, bese ufaka amakhukhi amasha.
Lawo makhukhi futhi awabiki noma iyiphi inzuzo kumuntu obhekele le webhusayithi. I-Automattic, Inc., futhi isebenzisa amanye amakhukhi ukusiza ukukhomba nokulandela umkhondo wezivakashi kumasayithi we-WordPress, funda ngokusetshenziswa kwazo kwewebhusayithi ye-Automattic, kanye nezintandokazi zabo zokufinyelela, iqoqwa engxenyeni "yamakhukhi" yakho inqubomgomo yobumfihlo.
Amapulatifomu evidiyo afana ne-YouTube nawo ayasetshenziswa
Amapulatifomu Esevisi Yokuhlangana (Bafaka amakhukhi esiphequluli ukulandela umkhondo wokuthengisa okuvela kule webhusayithi):
I-Amazon.com ne .es: I-Ireland.
Amakhukhi wokuxhumana nomphakathi: Amakhukhi avela kumanethiwekhi wokuxhumana nabantu angagcinwa kwisiphequluli sakho ngenkathi upheqa i-Discover.online ngokwesibonelo, lapho usebenzisa inkinobho ukwabelana ngokuqukethwe kwe-Discover.online kunethiwekhi yokuxhumana nomphakathi.
Izinkampani ezakha la makhukhi ahambelana nezinkundla zokuxhumana ezisebenzisa le webhusayithi zinenqubomgomo yazo yamakhukhi:
Ikhukhi le-Linkedin, njengoba kuhlinzekwe kuwe Umgomo Wamakhukhi
I-cookie ye-Facebook, njengoba kuhlinzekiwe ku sakho Amakhukhi yemfihlo
Imiphumela yemfihlo izoncika kwinethiwekhi ngayinye yezokuxhumana futhi izoncika kuzilungiselelo zobumfihlo ozikhethile kulama network. Akunjalo, akekho umuntu obhekele le webhusayithi noma abakhangisi abakwazi ukuthola imininingwane eqondakalayo ngala makhukhi.
Ngezansi, futhi njengoba kudingwa yi-athikili 22.2 ye-LSSI, amakhukhi angafakwa njalo ngenkathi upheqa le webhusayithi anemininingwane:
NAME DURATION INJONGO
Baphelelwa yisikhathi ekupheleni kweseshini. Bagcina imininingwane yabasebenzisi nezikhathi zabo zokuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
I-NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz Iminyaka engu-2 kusuka ekucushweni noma ukuvuselelwa. Bayakuvumela ukuthi ulandelele iwebhusayithi usebenzisa ithuluzi leGoogle Analytics, okuyinsizakalo enikezwe iGoogle ukuthola imininingwane mayelana nokufinyelela komsebenzisi kumawebhusayithi. Eminye imininingwane egcinelwe ukuhlaziywa okungaphezulu yile: inani lezikhathi lapho umsebenzisi evakashele iwebhusayithi, izinsuku zokuhambela kokuqala nezokugcina zomsebenzisi, isikhathi sokuvakasha, ikhasi lapho umsebenzisi efinyelele kwiwebhusayithi , injini yokusesha esetshenziswe ngumsebenzisi ukufinyelela iwebhusayithi noma isixhumanisi osikhethile, isibeka emhlabeni lapho umsebenzisi engena khona, njll. Ukucushwa kwalawa makhukhi kunqunyelwa kusengaphambili ngenkonzo enikezwa iGoogle, yingakho siphakamisa ukuthi uhlole Ikhasi lobumfihlo le-Google ukuthola imininingwane eminingi mayelana namakhukhi owasebenzisayo nokuthi ungawakhubaza kanjani (ngokuqonda ukuthi asinasibopho sokuqukethwe noma ubuqiniso bamawebhusayithi aseceleni)
.gumroad.com__ga Ekupheleni kweseshini Kuyisiteji sokuthengisa izincwadi zedijithali.
Izinsuku ze-30 Le khukhi isetshenziselwa ukubuyela ekuqondeni, ekusebenzeni kahle, ekubikeni nasekubonakalisweni kwezikhangiso eziku-inthanethi. I-DoubleClick ithumela ikhukhi kwisiphequluli ngemuva kwanoma yikuphi ukuphrinta, chofoza noma omunye umsebenzi ophumela kukholi kwiseva ye-DoubleClick. Uma isiphequluli samukela ikhukhi, sigcinwa kuso. Imininingwane engaphezulu
Insikayethonga Izinsuku ze-30 Izibalo Ithuluzi le-Web Clicky lisetshenziselwa ukuqoqa izibalo zokusebenzisa iwebhusayithi ezingaziwa. Imininingwane eqoqiwe ifaka i-Internet Protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, i-Internet Service Provider (ISP), isitembu sosuku / isikhathi, ukubhekisela / ukungena / amakhasi / ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isayithi nokunyakaza yomsebenzisi oseduze kwesayithi. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ekhasini le-Clicky imigomo yobumfihlo .
Tube You Iminyaka engu-2 emva kokucushwa Kusivumela ukushumeka amavidiyo we-YouTube. Le modi ingasetha amakhukhi kukhompyutha yakho uma uqhafaza kwisidlali sevidiyo se-YouTube, kepha i-YouTube ngeke igcine imininingwane yekhukhi engakhonjwa uqobo ekubukweni kwamavidiyo ashumekiwe isebenzisa imodi yobumfihlo ethuthukisiwe. Ngeminye imininingwane vakashela ishumeka ikhasi lolwazi le YouTube
I-Acumbamail Iminyaka engu-2 emva kokucushwa Ungumkhiqizi wokubhalisa ulwazi oluthe xaxa
I-PYPF Inyanga e-1 Amakhukhi wezobuchwepheshe Qinisa ezokuphepha ekufinyeleleni kupulatifomu yokukhokha ye-PayPal. Bangakwazi ukuxhumana babelo.com.
Ungawaphatha futhi uwakhubaze kanjani la makhukhi
Uma ungafuni ukuthi amawebhusayithi abeke amakhukhi kukhompyutha yakho, ungaguqula izilungiselelo zesiphequluli ukuze waziswe ngaphambi kokuba amanye amakhukhi alandwe. Ngendlela efanayo, ungaguqula ukucushwa ukuze isiphequluli senqabe wonke amakhukhi, noma amakhukhi wenkampani yangaphandle. Ungasusa noma yimaphi amakhukhi asevele ekhompyuter yakho. Khumbula ukuthi kuzofanela uvumelanise ukuguqulwa kwesiphequluli ngasinye nemishini oyisebenzisayo ngokwehlukile.
info (arroba) Discover.online yenza kutholakale kubasebenzisi abafuna ukuvimba ukufakwa kwamakhukhi angenhla, izixhumanisi ezinikezwe le njongo yiziphequluli ezisebenzisa ukusetshenziswa kwazo kubhekwa njengokubanzi kakhulu:
Inqubomgomo yamakhukhi igcine ukubuyekezwa ngomhla ka-18/04/2016